Adobe Bridge नि: शुल्क र कानूनी रूपमा
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Adobe Bridge फ्री
द्वारा Eva Williams, Naveen Pokhrel 2021-11-11, Nepali Blog
यदि तपाइँ फाइलहरु संग तपाइँको काम सजिलो बनाउन को लागी एक मजबूत रचनात्मक संसाधन प्रबन्धक प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तब एडोब ब्रिज मुक्त तपाइँको लागी एकदम सही हुनेछ। यसको मद्दत संग, तपाइँ सजिलै संग हेर्न, संगठित, सम्पादन र रचनात्मक संसाधनहरु साझा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यहाँ, मँ तपाइँलाई यो सफ्टवेयर को बारे मा सबै बताउनेछु र तपाइँलाई यो कसरी सित्तैमा डाउनलोड गर्न को लागी सिकाउनुहुनेछ।
निष्कर्षमा कूद नगर्नुहोस् कि त्यहाँ स्वतन्त्र, आधिकारिक रूपमा समर्थित फोटोशप संस्करण प्राप्त गर्ने कुनै तरिका छैन। मैले कसरी महत्वपूर्ण फोटो सम्पादन कार्यहरु मा सम्झौता बिना मुक्त फोटोशप प्राप्त गर्न को लागी धेरै उपयोगी सुझावहरु तैयार गरेको छु।
Adobe Bridge को लाभ:
रंग को केन्द्रीकृत सेटिंग्स
सुविधाजनक ब्याच प्रशोधन
चित्रहरु निर्यात गर्न सजिलो छ
समर्थन गर्दछ। रेटिना र HiDPI स्केलिंग समारोह संग प्रदर्शित हुन्छ
यो एडोब स्टक मा फोटो अपलोड गर्न गाह्रो छैन
स्वत: क्यास व्यवस्थापन
छिटो संगठन र मनोरम र HDR तस्वीरहरु को स्ट्याकि
एडोब ब्रिज के हो?
एडोब पुल केन्द्रिय फाइल भण्डारण र कार्यहरु ब्याच सम्पादन धेरै छ कि एक फाइल प्रबन्धक छ। यो सफ्टवेयर को उपयोग गरेर, तपाइँ तपाइँको समय बचाउन सक्नुहुन्छ र फाइलहरु संग तपाइँको काम लाई सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ।
तपाइँ एडोब ब्रिज कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
यो सफ्टवेयर रचनात्मक फोटोग्राफरहरु र videographers को लागी उपयोगी छ किनकि यसले उनीहरुलाई छिटो र गुणात्मक रूप मा आफ्नो दृश्य सम्पत्तिहरु को प्रबंधन मा मद्दत गर्दछ। जस्तै मैले पहिले उल्लेख गरेको छु, एडोब ब्रिज धेरै समय बचाउँछ र तपाइँलाई छिटो फाइलहरु खोज्न को लागी अनुमति दिन्छ। साथै, यो एडोब स्टक र एडोब पोर्टफोलियो मा फाइलहरु डाउनलोड र क्यामेरा र मोबाइल उपकरणहरु बाट फाइलहरु आयात सहित केहि अतिरिक्त प्रकार्यहरु छन्।
यो समीक्षा पढ्नुहोस् र एडोब पोर्टफोलियो मुक्त बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
Adobe Bridge को लागत कति छ?
जे होस् तपाइँ यो सफ्टवेयर बिल्कुल सित्तैमा एक अलग खरीद को रूप मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोगकर्ताहरु विरलै यो गर्छन्। यस को लागी कारण यो हो कि यो मुख्य रूप बाट एडोब कार्यक्रमहरु संग काम गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो, र पछि, एडोब क्रिएटिव क्लाउड योजना मा शामिल छ। यो योजना प्रति महिना $ ५२.99 खर्च हुन्छ यदि तपाइँ यसलाई एक बर्ष र $ .4 .4 .४ for को लागी किन्नु हुन्छ-यदि तपाइँ यसलाई एक पटकको खरीदको रूपमा किन्नुहुन्छ।
एडोब रचनात्मक बादल मुक्त बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
त्यहाँ विद्यार्थी / शिक्षकहरु को लागी कुनै छुट छ?
हो, त्यहाँ सम्पूर्ण सीसी आवेदन परिवार मा एक 60% छुट छ!
एडोब ब्रिज कहाँ सिक्ने?
तपाइँ इन्टरनेट मा धेरै पाठ्यक्रमहरु सिकाउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ कसरी यो सफ्टवेयर को एक अध्ययन योजना को एक भाग को रूप मा धेरै क्रिएटिव क्लाउड कक्षाहरु लाई सामेल गर्ने को उपयोग गर्न को लागी। त्यहाँ छुट्टाछुट्टै पाठ्यक्रमहरु, जुन पनी रचनात्मक बादल मा शामिल गरीएको छ, कसरी प्रत्येक कार्यक्रम संग काम गर्ने को व्याख्या।
जान्नुहोस् कसरी एडोब क्रिएटिव क्लाउड छुट प्राप्त गर्ने।
किन यो Adobe Bridge मुक्त को क्र्याक संस्करण को उपयोग गर्न को लागी खतरनाक छ?
यदि तपाइँ अवैध सफ्टवेयर को उपयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँ पछि धेरै समस्याहरुको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। तल, म तपाईंलाई सबैभन्दा गम्भीर को बारे मा बताउनेछु। आशा छ, यस पछि, तपाइँ मात्र कानूनी सफ्टवेयर को उपयोग गर्नुहुनेछ।
Pirated सफ्टवेयर को प्रयोग अवैध छ
यदि तपाइँ एडोब ब्रिज मुक्त अवैध संस्करण वा कुनै अन्य अवैध सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तपाइँ साइबर अपराधीहरुको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ र प्रतिलिपि अधिकार कानून को उल्लंघन को लागी एक मुकदमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो हुन्छ किनकि विकासशील कम्पनी सफलता प्राप्त गर्न को लागी आफ्नो उत्पादन मा धेरै पैसा र समय खर्च गर्दछ। कम्पनी आफ्नो सफ्टवेयर चोर्ने जो कोही द्वारा व्यापार बर्बाद हुन दिन चाहँदैनन्। यस प्रकार, उनीहरु लाई ट्र्याक गर्दछन् जो यसलाई अवैध रूप बाट स्थापित गर्दछन् र त्यसपछि उनीहरु विरुद्ध मुद्दा हाल्छन्। मँ सुझाव दिन्छु कि तपाइँ अवैध सफ्टवेयर संग सम्झौता नगर्नुहोस् किनकि यो दस गुना कम महंगा हुनेछ सफ्टवेयर को एक आधिकारिक संस्करण किन्न को लागी एक अवैध एक को लागी एक जरिवाना तिर्न को लागी।
त्यहाँ सधैं विभिन्न भाइरस संग तपाइँको पीसी को संक्रमण को एक मौका छ
धेरै प्रयोगकर्ताहरुलाई थाहा छैन कि जब उनीहरु अज्ञात वेबसाइटहरु बाट उनीहरुको कम्प्युटर मा अवैध सफ्टवेयर स्थापना गर्दछन्, उनीहरु धेरै भाइरसहरु लाई आफ्नो प्रणाली मा प्रवेश गर्न दिन्छन् र बिगार्छन्। एक राम्रो मामला परिदृश्य मा, यी केहि विज्ञापन भाइरस हुनेछ। जे होस्, त्यहाँ एक मौका पनि छ कि टोरेन्ट फाइल एक ट्रोजन वा यहाँ सम्म कि एक ह्याकर तपाइँको व्यक्तिगत डाटा को लागी पूर्ण पहुँच प्रदान गर्ने फाइल समावेश गर्दछ। यदि तपाइँ तपाइँको डाटा लाई खतरा मा राख्न चाहनुहुन्न, केवल कानूनी सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहोस्।
पायरेटेड संस्करणहरु मा अपडेट उपलब्ध छैन
हरेक कार्यक्रम अपडेट र बृद्धि को आवश्यकता छ। सफ्टवेयर को मात्र कानूनी संस्करणहरु कि उनीहरु उत्पादन नियन्त्रण र यो सबै समय सुधार गर्न को लागी को रूप मा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, तपाइँ यो महसुस गर्न को लागी यो एक धेरै गाह्रो प्रक्रिया हो कि पेशेवरहरु को एक धेरै मा काम गर्न को लागी आवश्यक छ र उनीहरुलाई आफ्नो काम को लागी तिर्नु पर्छ। यस प्रकार, यदि तपाइँ सफ्टवेयर को एक इजाजतपत्र संस्करण किन्नुहुन्छ, तपाइँ कुनै मुद्दाहरुको सामना गर्नुहुनेछ। सबै नयाँ सुविधाहरु र अपडेटहरु तपाइँको कार्यक्रम मा स्वचालित रूप मा जोडिनेछ र तपाइँ पनी ग्राहक समर्थन को लागी पहुँच हुनेछ यदि कुनै त्रुटि हुन्छ। जे होस्, यदि तपाइँ सफ्टवेयर को एक ह्याक संस्करण को उपयोग, तपाइँ ती मध्ये कुनै पनी पाउनुहुन्न।
3 नि: शुल्क Adobe Bridge विकल्प
यदि, केहि कारण को लागी, तपाइँ यो सफ्टवेयर को उपयोग गरीरहेको जस्तो लाग्दैन र एक राम्रो एडोब ब्रिज मुक्त विकल्प को कोशिश गर्न चाहानुहुन्छ, तल दिईएको सूची जाँच गर्नुहोस् र तपाइँ तपाइँको मनपर्ने को लागी एक कार्यक्रम पाउन निश्चित हुनुहुन्छ।
एडोब क्रिएटिव क्लाउड विकल्प बारेमा पढ्नुहोस्।
XNVIEW सांसद मुक्त प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँ यसलाई macOS, लिनक्स र विन्डोज मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
500 भन्दा बढी छवि ढाँचा समर्थन गर्दछ
सरल तस्वीर सम्पादन उपकरण प्रदान गर्दछ
यो रेडिएट र कन्फिगरेसन हेर्न गाह्रो छैन
धेरै भाषाहरु लाई समर्थन गर्दछ
मेटाडेटा विरुद्ध सीमित खोज
निजी प्रयोग को लागी मात्र नि: शुल्क
XnView सांसद एक महान एडोब ब्रिज मुक्त विकल्प हो। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ र धेरै छिटो संचालित छ। कार्यक्रम 500 छवि ढाँचा र लगभग 70 ढाँचाहरु को लागी निर्यात समर्थन गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यो सफ्टवेयर एक सरल इन्टरफेस छ कि संग काम गर्न को लागी धेरै सजिलो छ। XnView सांसद प्रकाश, रंग, वक्र र स्तर समायोजन सहित आधारभूत तस्वीर सम्पादन कार्यहरु प्रदान गर्दछ। यस बाहेक, त्यहाँ तपाइँ एक सुविधाजनक ब्याच प्रशोधन सुविधा को लागी पहुँच हुनेछ। यसको मद्दत संग, तपाइँ एक ढाँचा बाट अर्को फाइलहरु लाई रूपान्तरण गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ र ती सबै सीधा नाम बदल्नुहोस्।
IRFANVIEW नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
धेरै छिटो र हल्का
आधारभूत फोटो सम्पादन उपकरण प्रदान गर्दछ
छवि ढाँचा को एक धेरै समर्थन गर्दछ
ब्याच प्रशोधन को उपस्थिति
तेस्रो-पक्ष प्लग-इन समर्थन गर्दछ
विकल्प 'नियुक्ति शुरुवात प्रयोगकर्ताहरु को लागी गैर सहज हुन सक्छ
विन्डोज को लागी मात्र
IrfanView अर्को राम्रो एडोब ब्रिज मुक्त विकल्प हो। यो बजार मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको तेस्रो-पक्ष फोटो व्यवस्थापन सफ्टवेयर हो र यो बिल्कुल यो सफलता को हकदार छ। सबै भन्दा पहिले, कार्यक्रम हल्का छ र तपाइँको उपकरण मा धेरै ठाउँ लिदैन, जो कोहि जो विन्डोज को उपयोग को लागी एकदम सही छ। साथै, यो सफ्टवेयर छवि ढाँचा को एक धेरै समर्थन गर्दछ र तपाइँ सजीलै चित्रहरु हेर्न र आधारभूत फोटो सम्पादन गर्न को लागी धेरै सुविधाहरु प्रदान गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यो सफ्टवेयर ब्याच फोटो प्रशोधन को समर्थन गर्दछ यदि तपाइँ लोड लाई कम गर्न को लागी एकै समयमा धेरै तस्वीरहरु संग काम गर्दा आवश्यक छ। जे होस्, IrfanView को मुख्य फाइदा तथ्य यो हो कि यो तेस्रो पक्ष प्लग-इन्स लाई समर्थन गर्दछ। उनीहरूले तपाइँलाई अतिरिक्त तिर्नु पर्ने आवश्यकता बिना नै धेरै सुविधाहरु दिनेछन्।
फास्टस्टोन मुक्त प्रयोग गर्नुहोस्
आधारभूत फोटो सम्पादन को लागी उपकरण को धेरै
तुलना र धेरै चित्रहरु क्रमबद्ध गर्न को लागी आदर्श
सबै भन्दा राम्रो किबोर्ड नियन्त्रण प्रदान गर्दछ
फोटो रेटिंग को कमी
यो समय समयमा समय ढिलो हुन सक्छ
FastStone अर्को Adobe ब्रिज मुक्त विकल्प हो। जे होस् यो सफ्टवेयर अन्य समान कार्यक्रमहरु भन्दा कम ढाँचाहरु लाई समर्थन गर्दछ, यो अझै पनी बजार मा शीर्ष स्थान छ। FastStone एक साधारण इन्टरफेस हो कि तपाइँ फोटोहरु को एक संख्या हेर्न को लागी र सीधा उनीहरुलाई सम्पादन गर्न को लागी गर्व गर्दछ। साथै, यो सफ्टवेयर महान छवि सम्पादन उपकरण को एक धेरै प्रदान गर्दछ। यो रूपान्तरण र फाइलहरु को नाम बदल्ने को लागी ब्याच प्रसंस्करण को समर्थन गर्दछ, १५० भन्दा धेरै राम्रो संक्रमण प्रभाव र संगीत समर्थन संग स्लाइड शो बनाउन, स्क्रीन कब्जा को लागी संभावना प्रदान गर्दछ। सफ्टवेयर को सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो हो कि यो ढाँचा र नयाँ कार्यहरु को एक ठूलो संख्या को लागी समर्थन संग नियमित अपडेट हुन्छ।
Adobe Bridge नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
एडोब ब्रिज नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाइँ सबैभन्दा बलियो रचनात्मक सम्पत्ति प्रबन्धकहरु संग काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो तपाइँ सजीलै हेर्न को लागी, संगठित गर्न, सम्पादन गर्न र रचनात्मक सम्पत्ती को एक संख्या साझा गर्न को लागी सक्षम बनाउँछ। साथै, यसको मद्दतको साथ, तपाइँ बिभिन्न पुस्तकालयहरु संग सहयोग गर्ने र पुल बाट सीधा एडोब स्टक मा तपाइँको छविहरु प्रकाशित गर्ने संभावना हुनेछ।
Adobe Bridge लाभ